Konke sekusezandleni zezithunywa ze-ANC kanye noMdali - Dlamini-Zuma | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 17:24
Konke sekusezandleni zezithunywa ze-ANC kanye noMdali - Dlamini-Zuma
Ekurhuleni – UDkt Nkosazana Dlamini-Zuma nabamesekayo bakholelwa ekutheni benze konke okusemandleni abo ukuqinisekisa ukuthi uba ngumengameli olandelayo we-ANC kanjalo nomholi wokuqala wesifazane walo mbutho oneminyaka engu-105 wasungulwa.
UDlamini-Zuma, owayengusihlalo we-African Union Commission, ukhulume esidlweni sakusihlwa se-ANC Women’s League ebesihlelelwe ukuhlonipha yena ngoLwesithathu.
Ubekhuluma okokugcina ngaphambi kwenkomfa yokuqokwa kobuholi be-ANC ebhekwe ngamehlo abomvu ngoMgqibelo.
"Manje konke sesikubeke ezandleni zezithunywa kanye noNkulunkulu. Senze konke okusemandleni ethu njengoba manje sesivala lo mkhankaso," kusho uDlamini-Zuma ngesikhathi ebonga amalungu ethimba ebeliqhuba umkhankaso wakhe ngomsebenzi eliwenzile unyaka wonke limphendlela indlela.
OLUNYE UDABA: I-Cope ikugxekile ukufakwa kuka-Dlamini-Zuma njengelungu lePhalamende
UDlamini-Zuma noSekela Mengameli uCyril Ramaphosa yibo abahamba phambili kulo mjaho okwakucatshangwa ukuthi uphakathi kwabayisikhombisa abagqele isikhundla sokuhola uKhongolose.
Amagatsha ale nhlangano abeke phambili uRamaphosa ngamavoti angu-1 859, kwathi uDlamini-Zuma yena wathola angu-1 330 - okuyigebe abaningi abathi lincane kakhulu.
Ukukhankasa bekushubile kulezi zinsuku ezimbala ezedlule njengoba abalandeli bakaRamaphosa noDlamini-Zuma bebekhombana ngenjumbane ngokuthengwa kwezithunywa.
"Kunezinkulumo zokuthengwa kwezithunywa. Asikho isidingo salokho. Sisebenze kanzima, sanqamula lonke izwe sazisa abantu ukuthi kungani kumele basivotele," kusho uDlamini-Zuma.
Unanele ngokuthi ngokucabanga kwakhe akekho umholi ongaziqhenya ngokuthi uvotelwe ngenxa yemali.
LIVE: Relationship with the minister should be cordial - #NDPPInterviews
Table View 17:19 PM